Paul Pogba Oo Ka Hadlay Heshiiska Cusub Ee Manchester United Iyo Waxa Ka Jira
HomeWararka CiyaarahaPaul Pogba oo ka hadlay Heshiiska Cusub ee Manchester United iyo waxa ka jira
January 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Paul Pogba ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in Manchester United ay u soo bandhigtay heshiis uu todobaadkii ku qaadanayo 500 kun oo gini.
Xiddiga reer France oo haatan dhaawac ah ayaa ku jira lixdii bilood ee ugu dambaysay heshiiskiisa taas oo la macno ah in uu xor u yahay in uu kooxaha kale ee Yurub kala hadlo heshiis horudhac ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray warar sheegaya in Red Devils ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe £ 500k isbuucii si uu u sii joogo kooxda, laakiin afhayeen u hadlay ayaa u soo diray Sportsmail qoraal uu ku beeninayo.
“Si loo caddeeyo wararka warbaahinta, Paul looma soo bandhigin qandaraas cusub bilihii la soo dhaafay, Paul wuxuu si buuxda diiradda u saaray ka soo kabashadiisa dhaawaca isaga oo ujeedadu tahay inuu kooxda ku caawiyo sida ugu dhakhsaha badan,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Pogba ayaa ku soo laabtay Manchester United 2016, iyadoo kooxda ka ciyaarta Premier League ay qarash gareysay 89 milyan ginni si uu dib ugu soo celiyo, tan iyo xilligaas wuxuu u saftay 212 kulan, isagoo dhaliyay 38 jeer.
Red Devils ayaa ku soo laabatay garoomada isniinta kulan ka tirsan FA Cup-ka marka ay wajahdo Aston Villa, laakiin xiddiga reer France ayaa maqnaan doona.